Sare u kaca Suuqgeynta iyo Xayeysiinta Dadweynaha Ku saleysan | Martech Zone
Isniin, April 25, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Wargeyskooda cad ee ku saabsan Suuqgeynta Dad-ku-saleysan, Atlas waxay ku bixisaa tirokoobyo xiiso leh oo ku saabsan suuqgeynta iyo xayeysiinta ku saleysan dadka. Intii aad waqti badan ku bixineysay mobilka guud ahaan, 25% dadku waxay isticmaalaan 3 ama aalado ka badan maalintii, iyo 40% dadka ayaa aaladaha u beddela si ay u dhammaystiraan hawl
Waa maxay Suuq-geynta Dadku?
Barnaamijyada iyo barnaamijyada qaarkood waxay siiyaan xayeysiistayaasha awood ay ugu soo gudbiyaan rajada ama liisaska macaamiisha si ay ula mid noqdaan kuwa isticmaala labada. Liisaska waa la soo gelin karaa oo lala barbardhigi karaa isticmaaleyaasha nidaamka waalidka ku saleysan cinwaanka emaylka. Kadib xayeysiiyaha wuxuu bartilmaameedsan karaa liisaskaas ololeyaal gaar ah.
Waxaan isku arkaa si toos ah timahan iskutallaabta ah. Waxaan u adeegsadaa taleefankayga gacanta si aan ugu dhex rogo emaylka iyo arrimaha bulshada, ka dibna kiniinkayga si aan uga jawaabo kuwa badan, ka dibna waxaan u dhaadhacaa shaqada muhiimka ah ee laptop-kayga. Tani, dabcan, waxay dhibaato weyn ku tahay xayeysiistayaasha. Isticmaalka habka webka-cookie, waa wax aad u adag in la isku xiro rootiga oo la aqoonsado rajadaada ama macaamilka aalad kasta oo ay isticmaalayaan.
Sida laga soo xigtay Nielson OCR Norms:
58% qiyaasta cookie-ku-saleysan waa mid aad u badan
141% hoos u dhigid soo noqnoqoshada qiyaasta cookie-ku-saleysan
65% saxnaanta bartilmaameedka dadka ee cabirka ku saleysan cookie-ka
12% beddelka ayaa lagu seegay cabbirka ku saleysan buskudka
Taasi waa sababta suuqgeynta dadka ku saleysan ayaa sii kordheysa. Halkii ay ka suuqgeyn lahayd cookies cookies-ka oo ay isku dayaan inay isku xirmaan dhibcaha, shirkaddu waxay si toos ah ugu gudbin kartaa rajadooda ama liistada macaamiishooda barxadda xayeysiinta ka dibna bartilmaameedsaneysa kuwa isticmaala aalad kasta. Maaha wax aan caqli gal ahayn - dad badani waxay adeegsadaan cinwaanno emayllo kala duwan oo u dhexeeya barnaamijyadooda bulshada iyo meheradahooda ganacsi. Laakiin waxay leedahay xoogaa faa'iidooyin aan caadi ahayn oo ka sarreeya bartilmaameedka caadiga ah iyo geeddi-socodka.
Signal iyo Econsultancy xog wareystay 358 suuqleyda caanka ah ee Waqooyiga Ameerika iyo kuwa iibsada warbaahinta si loo fahmo saameynta iyo mustaqbalka warbaahinta wax looga qaban karo ururadooda dhexdooda. Waxaan ogaanay in xayeysiiyayaashu ay diyaar u yihiin inay kordhiyaan maalgashigooda xalalka warbaahineed ee wax laga qaban karo ee ku xiraya xayeysiintooda macaamiisha dhabta ah waqtiga dhabta ah, iyaga oo awood u siinaya inay bartilmaameedsadaan xayeysiinta dhijitaalka ah ee saxda ah iyo ku habboonaanta. Ugu dambeyntiina, xayeysiinta dadka ku saleysan ayaa ah istiraatiijiyad iyaga loogu talagalay inay kaga adkaadaan caqabadaha adduunka is-dhexgalka.
Natiijooyinka waa kuwo cajiib ah! 70% xayeysiiyayaashu waxay ku sifeeyeen natiijooyinka bartilmaameedka kooxda-koowaad inay yihiin kuwo wanaagsan ama la filayo, 63% ee xayeysiiyayaashu waxay soo sheegaan inay sare u kaceen heerarka gujinta, iyo 60% ee xayeysiiyayaashu waxay la kulmeen sicir baddal sare.
Tags: suldaanimoFacebookdhagaystayaasha facebookdadka ku saleysanxayeysiinta dadka ku saleysansuuqgeynta dadka ku saleysansignalkaTwitter
Qalabka Ha Sameyn Suuqa